Zuva: Chivabvu 18, 2020
Wokupedzisira Minute: Erdogan Anozivisa Nguva Yekudzoka Mune Masango makumi masere neshanu Munguva yeMutambo
Mushure memusangano wecabinet, mamineti ekupedzisira kubva kuna Mutungamiri Recep Tayyip Erdogan, akataura chirevo ... 81-23-24 uye 25 Chivabvu 26 (kusanganisira 2020 uye 23) [More ...]
Süleyman Reyhan ndiani?
Akazvarwa muKaramamrsel muna 1970. Apedza kudzidza kubva kuImam-Hatip High School, akatanga chikoro chake cheyunivhesiti muAnadolu University Faculty yeBhizinesi Administration muna 1989. Mushure mekupedza kudzidza kwake, akapedzisa basa rake rezvemari rekudzidza. Eskişehir Osmangazi University Faculty yeDzidzo [More ...]
Purofesa wekutsvaga quantum paMaltepe University. Dr. Afif Sıddıki nechikwata chake vakagadzira hosha yekubvisa hutachiona kuchengetedza vanochengetedza hutano nevarwere kubva kutapukirwa nekurwisa chirwere chegoronavirus. Maltepe University Engineering uye Natural Science [More ...]
Turkish Cargo (THY), iyo inotakura zvinhu yeTurkey Airlines, iyo yakawana hukuru hwekukura pakati pevatakuri vepamusoro 25 vatakuri vekutakura mweya, vanoenda kuIzmir musi wa 28 Chivabvu, vaine ndege zuva nezuva. [More ...]
Mars Logistics kubva muna Chivabvu 15 njanji yekune dzimwe nyika kutakura zvinhu kunoitwa muTurkey yakatanga sezvakarongwa sekutanga kushandiswa kweMarmaray. Nhengo yeMars Logistics Board Gökşin Günhan akadaro mutsara weMarmaray [More ...]
China: Pakutanga kweCovid-19 Kuongorora
China yakatozivisa kuti iko kutanga kweongororo yeCovid-19. China Ministry yekune dzimwe nyika SözcüSü akataura kuti yatove nguva yekutanga kuferefeta nezvekwaakabva uye kupararira kwehutachiona hwekorona, iyo yakauraya vanhu vanopfuura mazana matatu ezviuru pasi rose. [More ...]
Ankaray Line ichawedzeredzwa kuMamak ine 8 Zviteshi! Kuzivisa kweTender Kwakabudiswa
Minister Karaismailoğlu, mukutaura kwavo, vanoziva nezvekutakurwa kwemigwagwa munguva chaiyo neTransport Electronic Tracking and Control System (U-ETDS), iyo inopa kutarisisa kwemagetsi kwezvinhu, kutakura zvinhu pamwe nekufambisa kwevatakuri zvinotakurwa nemakambani anoshanda mukufambisa. [More ...]
Isu takarongedza TCDD Chitima Nzvimbo Nhamba dzefoni Nhamba dzako iwe. Chekutanga pane zvese, tinokurudzira kuti ufonere general TCDD runhare nhamba 444 8 233. Kuti uchengetedze nhamba iri mundangariro, kubva pa444 kusvika kuchiratidzo chekufona pafoni yako [More ...]
Gurukota rezvekutakurwa nezvivakwa Adil Karaismailoğlu akataura chirevo kune venhau muLapseki, kwavakaenda kumhemberero yekuisira chigaro chekupedzisira mumatare esimbi e ofanakkale Bosphorus Bridge. Karaismailoğlu achitsanangura mapurojiti eIse Ministry yenguva itsva, nechitima [More ...]
Tekirdağ Port Embankment Zvirongwa zvakatanga kutenderwa muna 1997 nebazi rezvemabasa eruzhinji nekugadzirisa dzimba. Gare gare, chiteshi ichi chakavanzika uye ndokuenderera mberi nezviitwa pasi pezita reAkport Port. Muna 2006, [More ...]
Scissors Modified muKonya Tram Line
Konya Metropolitan Municipality inoenderera mberi ichibata bata iro rinozoreruzira traffic mukati meguta rose nekushandura mazuva ekudzoka kuita mikana. Konya Metropolitan Meya Uğur İbrahim Altay, nzira iyo vagari kumba [More ...]
Mari Yemitero Yakawedzera ne5% pagore muIstanbul
Pane avo makumi matanhatu neshanu muzana muzana wemari yemitero yakaunganidzwa muTurkey muIstanbul, mari yemitero yakawedzera ne45,5 muzana zvichienzaniswa neyakaitika rapfuura. Mugove wemutero wekushandisa wega mumubhadharo wemari yakawanda iri makumi maviri nenomwe muzana, mumitero yemitero [More ...]
Izmir Metropolitan Meya Tunç Soyer akaongorora yakawedzera basa asphalt paving mabasa mumazuva akaiswa nguva yekudzoka. Soyer akapawo nhau dzakanaka nemugwagwa pamberi penzvimbo yekutenga muGaziemir wakananga kuKonak nzira. [More ...]
Ramangwana Nharaunda Yekutakura Nzvimbo Nzvimbo muTurkey
Muhurukuro yavo kumhemberero yekupedza shongwe yeÇakkale 1915 Bridge, Mutungamiri Erdoğan akati, "Tine mabasa akawanda emigwagwa, njanji, yemhepo uye yegungwa achiri kuvakwa. Kana izvi zvapera, Turkey, [More ...]
Izmir Metropolitan Municipality Meya Tunç Soyer ari kukurumidza kuita mabhasikoro emigwagwa vachipesana nehuwandu hwemotokari huri kutarisirwa kuwedzera nedanho rekuita. Soyer, anofamba munzira aine bhasikoro rake kunoongorora mapurojekiti ipapo, akati, "Mushure mekupararira kwedenda," [More ...]
Kune Mevlana Development Agency yeRepublic of Turkey, Mutemo Nhamba 5449 paMabasa eVashandi veMabasa Ekuvandudza, maAgency Agency Utariri hweVashandi uye Masangano Akabatana neMasangano uye Mamwe Masangano uye Masangano Akabatana neMashumiro Nha. [More ...]
Yakagadzirwa uye yakagadziridzwa mukubatana neTÜBİTAK SAGE uye ASELSAN, Sensitive Guided Kit ammunition yakawedzerwa kumusoro we laser mutsva uye iko kwechokwadi kwechinangwa chinangwa mabhomba akawedzerwa. Mune chirevo chakaitwa paTÜBİTAK SAGE's social media account [More ...]
Organic Fertilizer Rutsigiro Kubhadhara Kwakatangwa Kune Varimi!
Gurukota rezvekurima uye Masango Bekir Pakdemirli akataura chirevo pamusoro petsigiro dzinofanirwa kuiswa kuvarimi vanoshandisa fetiraiza nemanyowa muna 2019. Gurukota Pakdemirli chirevo chakadai; “Chinhu chechisimba chakafukidza ivhu redu [More ...]
Kugadzirwa Kwemagetsi Kunotanga Mangwana paIlısu Dam
Turkey, imwe yemagetsi yakakura kwazvo Kugadzira Ilisu dhamu chirongwa, yekutanga yevatanhatu vazukuru, Chivabvu 19 Atatürk Kurangarira uye Vechidiki neMitambo Zuva rakatangwa. Iine vhidhiyo yemusangano nzira yeMutungamiri Recep Tayyip Erdoğan [More ...]
Baskentray Nguva, Nzvimbo uye Tiketi Mitengo
Başkentray Ankara ndeimwe yemapurojekiti akabatsira kwazvo kune rwendo rweguta rwemukati. Ankara-Istanbul, Ankara, Sivas uye Ankara, Konya High Speed ​​Zvirongwa zvechitima mu Ankara [More ...]
Trade Fair neNzvimbo uye yeNyika Software Contribution Inozoita Chitambi
Gurukota rezvekutengeserana, Ruhsar Pekcan akataura kuti achatanga ma fairs chaiwo akarongerwa kuti azadziswe zvakare nyowani itsva dzekoronavirus (Kovid-19) neshangu uye ganda rakanaka "Shoedexpo" musi waChikumi 1-3. [More ...]
Bodrum castle ichavhurwa pakupera kwaJune, Sumela Monastery sepakutanga kwaJuly
Gurukota rezvetsika uye Tourism, Mehmet Nuri Ersoy akataura kuti chikamu chechipiri kudzoreredzwa chinoshanda muBodrum castle chaive pedyo nemugumo, uye kuti vanoronga kuzarura imba iyi yekushanya pakupera kwaJune nguva pfupi yadarika. Minister Ersoy, kudzoreredzwa muBodrum castle [More ...]
Iyo Kubika Nguva yeR & D Centers Yakawedzerwa
Nguva yekutumira yezviratidziro zveiyo R & D nenzvimbo dzekugadzira dzeBazi rezvemaindasitiri uye tekinoroji nemishumo yekuongorora mari yemabhizinesi muTechnology Zones (TGB) kwenguva yemwedzi mumwe kusvika 30 June 2020. [More ...]
Mhuri, Vashandi neVashandi Zvemagariro VaZehra Zümrüt Selçuk; "Nekuda kwekukoshesa kwatinopa kumabasa anotungamirwa nemhuri, isu takasimbisa kudzoka kwevana 2019 kuvana vavo mumhuri muna17." inowanikwa mune tsananguro. ZveShumiro kuvana [More ...]